Seen ku ogaan karaa diinta sax ah – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Waxa aan ahey qof Soomaaliya kuma hadlo carabiga seen ku ogaan karaa in diinta islaam ku tahay diinta ugu saxan diimaha?
Dadkayga miyaan dhinac ka raacaa ?
Mise waxaa isaarran in aan ogaado saxnimada diinta aan qaadanayo?
Midda horre haddii ay tahay laba arimood midee weeye? Ma ilaahay ayaan ku raaligalinaa mise dad ayaan ku raaligalinaa?
Haddii ay tahay in aan ilaahay ku raaligalinayo saw ilaahay ma oga in aanan diintiisa aqoonba u laheyn miyuu igu rabaa jahliga iyo in aan la jaanqaadka bulshada? Haddiise ay tahay in aan bulshada ku raaligalinayo wax aanan aqoon ama rumeyaneyn saw ma noqoneyno bulsho nifaaq ku nool ah oo kala baqda oo hoosta ka dunsn?
Se haddii ay tahay in aan baarro saxnimada diinta miyaan qaadanayaa oon rumeynayaa kahor inta aanan bogan baaritaan-ka? Maxaan se u baahanahay si aan ugaarro saxnimda diinta?
1. In aan barto luqadda carrabiga illaa xad aan awoodo in aan taxdiga Qur’aan-ka ka jawaabo ama gacanta taago.
2. In si qota dheer u darso Qur’aan-ka illaa aan awood u yeesho in aan u fahmo sida uu yahay.
3. In aan darso diimaha kale oo idil oo gaaraya kumanaan .
4. Si aan u darso diimaha kale waxa aan u baahanahay in aan barto luqadaha asalka u ah diimahan si aan uga fogaado ka been sheeg.
5. Marka aan barto luqadahan kumanaan-ka gaari doono waxa aan u baahanahay diin walba in aan u barto sida tan islaam-ka.
6. Markan ayaan billaabayaa in aan is barbardhigo diimaha oon helo farqiga udhaxeeya dhammaantood si aan uga bad baado in go’aan qaldan aan gaarro.
Diimaha adduunka ka jirra waxaa lagu tilmaamaa 10, 000( toban kun) waxaa ka mid ah 150 diin oo ay heystaan mid walba oo ka mid ah hal malyan oo qof kusii darso in aanay hadda joogin hal rasuul oo dadka hor taagan oo leh arka mucjisadii alle ila soo dirray sidii ummadahii hore lagu sheegay.
Diinkasta oo diimahaan ka mid ah xitaa tan islaamka waxaa ka dhex jirra tobanaan ama boqolaal kooxood oo sheeganaya in ay yihiin kuwa sida saxda ah diintooda uga tarjumaya.
Haddaba marka ilaahay cadligiisa, naxariistiisa iyo la is bar bar dhigo dacfiga aadanaha waa mustaxiil in ilaahay ku cadaabo qof aadami ah; “sideebaad ku garranweysay diinta saxda ah” ?
Balse marka ilaahay aan ku qiimeynno sida innagu aan ku fakarno udifaacno gobolka aan u dhalanay qabiilka aan u dhalannay diinta aan ku dhalannay eed u mooddo in ilaahay sidaas kuula xiiqsanyahay waligaa kuu soo biximeyso in aad gar qaadato, ee gabar baadiyaha Shinbiraale ari ku ilaashaneysa ayaad kula colloobeysaa salaaddii ma tukatay adiga oo aan xitaa is weydiin tolow ma taqaan tawxiidk macnihiisa mase sidii aabaheed ay uga dhaxashay xaynta arriga ah ayay uga maqashay kalimaddan tawxiidka.
Mid Soomaali ah oo baadiya geel ku ilaashanaya ayaa la weydiiyay ilaahay iyo rasuulkiisa ma taqaan markaas ayuu yiri kalama foga oo in ay qaraaba yijiin ayaan filaa!!